Ingabe kuyiqiniso ukuthi i-SEO ne-backlink quality ayinakuhlukaniswa?
Yebo, kuyiqiniso - i-SEO iphathelene nama-backlink aphezulu, futhi ngokufanayo. Eqinisweni, iphrofayli yesixhumanisi sakho sewebhusayithi kufanele ibe yikhungo sakho sokwenza ngcono injini jikelele. Ngokufana nanoma iyiphi enye into ye-SEO, izinga lokubuyisela emuva kwekhwalithi ngeke likunikeze noma yimiphi imiphumela esheshayo futhi elinganisiwe phakathi nobusuku. Ngokuvamile, isakhiwo sokuxhumanisa izixhumanisi eziphilayo siqhubeka nokuqhutshwa ngokucophelela nokusebenza okuqhubekayo ukuze kugcinwe ukuphumelela. Futhi ungenza yonke imizamo yakho ukusebenza - konke okudingayo ukulandelela eduze inqubo futhi wazi zonke iwebhusayithi oxhunywe nazo - lentes angulares fotografia digital. Ekuboneni kokuqala, lokho kungase kubonakale kuwumsebenzi odambisayo.
Kodwa ungakhathazeki - vele uphume futhi usebenzise elinye lamathuluzi alandelayo ku-intanethi ukugcina ukuqapha iphrofayela yakho ye-backlink, njengoba nje ngenza kubhulogi yami. Lapha kukhona - Semalt Analyzer (Semalt), Open Site Explorer (Moz), noma Rank Signals. Ngaleyo ndlela, qinisekisa ukuthi yonke i-backlink iyasebenza, futhi inombhalo ohambisana ne-anchor ofanayo. Into ewukuthi akufanele neze ube namahange ezindala njengokuthi "chofoza kulesi sixhumanisi. "Kunconywa ukuthi ubenze ngokucacile, futhi futhi okungenani okungenani elilodwa elingukhiye ukwenza isiphakamiso esifushane, ukuze umsebenzisi azi ukuthi yini engalindeleka.
I-SEO enhle idinga ukubuyiselwa emuva kwekhwalithi
Ngokuvamile, izinjini ezinkulu zokusesha (njenge-Google ngokwayo) zikhomba ukuthandwa kwakho kwewebhu, ukuhambisana, ikhasi kanye nesizinda igunya elisezingeni eliphezulu lephrofayela ye-backlink. Yingakho ama-backlink e-organic eqinisweni phakathi kwamasignali enamandla kunayo yonke ukunikezwa isikhundla esiphezulu ohlwini lwemiphumela yokusesha. Ngingaqaphele ukuthi, izixhumo ezingemuva ziyizinto ezibaluleke kunazo zonke, ikakhulukazi mayelana nokubuyekezwa kwamuva kwe-algorithm okulethwe yi-Google. Ngenxa yalokho, konke okumele kube khona ngemuva kwe-backlink kufanele ube nekhwalithi yabo kanye nemvelo yemvelo, hhayi nje inani elincane lompofu, noma uNkulunkulu angavumeli izixhumanisi ezizenzakalelayo.
Yini eyenza i-backlink yekhwalithi?
Ngokusho kochwepheshe be-SEO, ama-backlink asemgangathweni anqunywa ngezici ezimbalwa nje. Okokuqala, i-backlink yekhwalithi njalo ivela kuwebhusayithi efanele ngokuthembeka nokugunyazwa okuphezulu. Okwesibili, kufanele njalo idale ithrafikhi yewebhu kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi. Okulandelayo, i-backlink ngayinye yekhwalithi kufanele ifakwe emgqeni we-anchor wesokudla - kungaba nomdlalo wangempela wegama elingukhiye, ibinzana lekhiye elide, noma okungenani ukubhekisela okufanayo. Ekugcineni, ubuhle be-backlink ye-SEO abukatholakali kalula. Ngakho-ke angeke atholakale embhalweni wokuqukethwe. Khumbula, Nokho, ukuthi ukuhlukahluka kuyisihluthulelo sokuxhumanisa impumelelo yokwakha. Ngifisa ukuba nephothifoliyo ye-backlink ehlukahlukene ehlotshaniswa ngezixhumanisi ezihlukahlukene ezivela ezindaweni eziningi ezihlukene ngezinga elingalingani lekhasi kanye negunya lesizinda - lizobonakala njengesignali esikahle sokusezingeni lomuntu kusuka kumbono we-Google, kanye nazo zonke izinjini ezinkulu zokusesha.
Ngeshwa, abantu bavame ukubiza izinhlawulo zesimo - nje benza konke okusemandleni ekwakheni izinto ezingaphezulu kwezindleko, okuholela ekuphuleni imikhombandlela enkulu yokucinga. Kunezindlela eziningi ezakhiwe ngqo ukukhohlisa izinjini zokusesha. Ukuphendula ngaleli qiniso, i-Google ayivumelanga ngokuphelele le mizila elandelayo yeGrey Hat efana nezixhumanisi ezifihliwe noma umbhalo ohlanganisiwe, ukhokhelwe emuva, uwakhulisa "emapulazini okuxhumanisa," ukuxhunyaniswa kwezixhumanisi (amasondo), njll.Yiqiniso, ezinye zalezi zikimu zisasetshenziswa yi-webmasters abangenakekeli noma abanikazi besayithi be-novice. Noma kunjalo, kufanele ugcine kude nokusebenzisa noma yiziphi izinhlelo ezikhohlisayo. Uma kungenjalo, kungaba kalula ngokweqile uma yonke into iphela newebhu lonke elivinjelwe ngokuphelele emiphumeleni yokusesha - kanye naphakade.